Ukuphupha i-rattlesnake Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ngokuqhelekileyo siyayiva inyoka ngaphambi kokuba siyibone: ngoncedo lwerakhi eyenziwe ngamakhonkco empondo ekupheleni komsila wayo, olu hlobo lwenyoka enobuhlungu lunokunika isilumkiso xa sihlasela. Abantu baseYurophu ngokubanzi bayayazi nje i-rattlesnake evela kwiimuvi okanye kumabali, njengoko izalelwe eMelika.
I-rattlesnake idlala indima ebalulekileyo kwiintsomi zaseMelika ezifana nomdaniso wenyoka eHopi. Ngoncwadi luye lwasetyenziswa naseYurophu, umzekelo ngolwimi "Ityhefu njengenyoka".
Ndiyabulela kunyango lwangoku, ukulunywa yinyoka kunqabile ukuba kubulale abantu. Nangona kunjalo, olu hlobo lwenyoka lumele eyona ngozi inkulu. Ngokukodwa ukuba uva ukukhwaza kuqala kodwa ungayiboni, kubonakala kusongela kakhulu, kukho into enobuqhetseba kwaye ihlazo ngayo.
Wenza ntoni umngqusho emaphupheni ethu? Inokuchazwa njani njengomqondiso wephupha?
1 Uphawu lwephupha «iruttlesnake» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iruttlesnake» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iruttlesnake» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iruttlesnake» - ukutolikwa ngokubanzi
Kuxhomekeka kwindlela i-rattlesnake ebonakala ngayo ephupheni, inokuba neentsingiselo ezahlukeneyo. Ngokubanzi, limela ixesha elidlula kubomi babaphuphi, banokubona kwikamva kwaye iimfazwe ezizayo okanye ubonise ubunzima. Umphuphi uyacetyiswa ukuba azinyamekele kakuhle yena kunye nabathandekayo bakhe.
Ukuba uva ukukhala kwenyoka kuphela, kodwa ungayiboni, uphawu lwephupha lubhekisa kumnyhadala wakho. elidlulileyo. Nokuba unokwenza impazamo, owakha wayenza, okanye umntu uza kuhlawulela ukungabikho kokusesikweni okwenziweyo kuwe ngokuphupha.
Ukuba iphupha lilunywe yinyoka, oku kuthathwa njengophawu olubi, ukujongana nemilo enzima okanye iimviwo ngaphambili, ekufuneka uyilungiselele kakuhle. Unokoyika ukhuseleko lwakho okanye unayo Yintlungu yabantu abasondele kuwe.
Ukubona ubuhlungu benyoka ephupheni nako kuyatolikwa kweli cala. Ukuba i-rattlesnake ifile, kwelinye icala, ifuzisela ubungqina obusindileyo bobomi obushiye ngempumelelo iphupha.
Uphawu lwephupha «iruttlesnake» - ukutolikwa kwengqondo
I-rattlesnake ihlala ibonakala njengophawu lwephupha xa iphupha livakalelwa kukuba kukho into engalunganga. Ngokurhabaxa ekupheleni kolayini, ilumkisa izoyikiso peligro. Oku kunokuba yinyani, umzekelo, kuba iphupha livakalelwa kukuba yena okanye isihlobo asiphilanga, okanye isenokuba luloyiko olungenasiseko oluchazwe kwiphupha elisoyikisayo lenyoka. Isenokuba kukuxhalaba kwezezimali, ungquzulwano kumbutho, okanye iingxaki zempilo.
Ukuba iphupha le-rattlesnake liphindaphindeka, oonobangela bokuphazamiseka okanye uloyiko kufuneka baphandwe.
Ukuba awunamava esilwanyana nje esinye, kodwa kwaneenyoka ezimbini, intsingiselo yokomfuziselo yesi silwanyana siphupha iphindwe kabini - kukho imicimbi emibini eya kubangela inkathazo kulowo uphuphayo. Rhoqo inokuba ngabantu ababini abachasene nomphuphi nezicwangciso zakhe. Isaci apha: bonisa umoya wakho wokulwa!
Uphawu lwephupha «iruttlesnake» - ukutolika kokomoya
Ngokomoya, inyoka ibonakalisa uhambo lobomi kunye nokuqhubeka ephupheni. Ukudlula kwexesha.